Aqalka Sare ee Maraykanka oo su’aalo weydiiyey safiirka cusub ee Soomaaliya – Bandhiga
Aqalka Sare ee Maraykanka oo su’aalo weydiiyey safiirka cusub ee Soomaaliya
Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Sare ee Maraykanka, ayaa su’aalo weydiiyey dhowr safiir oo dhowaanta uusoo magacaabay Madaxweyne Donald Trump, kuwaasoo uu ku jiro safiirka cusub ee Soomaaliya, Donald Yukio Yamamoto.
Safiirrada su’aalaha la weydiiyey ayaa kala ahaa; David Fischer oo u magacaaban safiirka cusub ee Morocco, Earl Miller oo u magacaaban safiirka cusub ee Bangladesh, Daniel Rosenblum oo u magacaaban safiirka cusub ee Uzbekistan, Donald Yamamoto oo u magacaaban safiirka cusub ee Somalia iyo Kip Tom oo u magacaaban danjiraha cusub ee Hay’adda Qaramada Midoobey u Qaabilsan Cuntada iyo Beeraha.
Xildhibaannada Aqalka Sare ayaa danjireyaasha cusub ka xog waraystey waxyaabaha u qorsheysan inay qabtaan, sida ay uga falcelin doonaan dhibaatooyinka ka jira wadammada loo magacaabay iyo weliba qaabka ay xogaha diblumaasiyadeed ula soo wadaagi doonaan xafiisyada dowliga ah ee ay shaqo wadaagga yihiin.
Xubnaha Aqalka Sare ayaa la filiyaa in ay isla todobaadkan ansixiyaan safiiro uu ku jiro danjiraha Soomaaliya Donald Yamamoto, kaasoo Madaxweyne Donald Trump soo magacaabay bishii July ee lasoo dhaafay.
Yamamoto oo ah diblumaasi ruug caddaa ah, wuxuu xilligan madax ka yahay Waaxda Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykaka u qaabilsan Qaaradda Afrika.
Safiika cusub ee Maraykanka oo da’diisu 65 sano jir tahay, kuna soo dhex jiray howlaha diblumaasiyadda tan iyo sannadkii 1980, wuxuu horay usoo noqday safiirka Maraykanka u fadhiya dalal ay kamid yihiin: Jabuuti, Ethiopia iyo Eritrea.
Sidoo kale, wuxuu sannadkii 2016 soo noqday, howl fuliyaha xafiiska ergada dublumaasiyiinta Mareykanka ee joogey Soomaaliya.
Magacaabistiisa Donald Yukio Yamamoto ayaa timid, kaddib markii bishii September ee sanadkii hore uu si iskiis ah isu casiley safiirkii hore ee Maraykanka Stephen Schwartz.
Schwartz oo ahaa safiirkii ugu horreysey ee muddo 25 sano ka badan Marayakanku usoo dirsado Soomaaliya, waxaa lasoo magacaabay bishii June ee sannadkii 2016.